Ejiji edozi ejiji maka mmepe akwụkwọ 2018 - nkecha, mara mma, isi, mma, ihe ọhụrụ, nke mbụ, mgbede, ịkwa akwa, elu, bun, na bangs, ntutu isi
Hairstyles maka ngụsị akwụkwọ 2018 - ejiji ejiji ogologo oge, ogologo na obere ntutu
Oge nke bọọlụ bọọlụ nke ndị na-agụsị akwụkwọ adịghị dị anya, ya mere, ọ dị mkpa ugbu a iji lekọta anya nke mara mma. Ọ bara uru ilebara ihe niile anya, na-aṅa ntị ọ bụghị naanị n'ịme ihe nlekota na nhazi nke ọma, kamakwa ịmepụta. Na nke mbụ 2018 ga-enyere aka ịchọpụta nhọrọ ma chọpụta ihe ngwọta nke ọma na ụdị onye ọ bụla.
Mmezi nke mmezu nke 2018 - ejiji ejiji
Ọ dị ezigbo mkpa na nhazi gị ọ bụghị nanị na kwekọrọ n'ọnọdụ ndị ọhụrụ, kama ejikọtara ya na uwe. Ọ bụrụ na ịchọrọ ejiji mgbede mara mma , emesola ntutu isi, na-enye ha ụdị obi ọjọọ. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na i tinyewo ihe niile ị na-emepụta n'ịdị na-eyiri uwe dị mma, mgbe ahụ, ịtọgbọ ahụ kwesịrị ịbụ ihe na-abụghị ụkpụrụ, na-eme ka àgwà gị dịkwuo mma. N'ikpeazụ, ndị na-edepụta ihe na-emetụ n'ahụ na-emetụta ihe niile kachasị mma nke ụlọ ọrụ mara mma nke oge a. Ka anyị hụ ụzọ isi ewu ewu na ngụsị akwụkwọ afọ 2018:
Na ụdị nke 1920s . Ntuzo mbu na ihe mara mma bu nhoro nke eji eme ihe n'udi nke Chicago. Ejiri nlezianya debe na ebili mmiri dị ukwuu nke eriri dị iche iche na-eme ka ụdị ọdịdị ọ bụla dị mma ma jiri aka ya kwado ma gosipụta ihe doro anya na ụda obi iru ala.
Ụdị Grik . A na-ewere nhọrọ a dịka ihe a kpochapụla, nke kwesịrị ekwesị maka ịlụ nwoke na nwanyị. Na uwe a agaghị adị mkpa. Ọnụnọ nke braid braided ma ọ bụ ihe mkpuchi gburugburu isi ga-agbakwunye ụda olu nke mara mma.
Asymmetry . Ihe ọ bụla na-enweghị isi, ma ịkpụcha ntutu isi ma ọ bụ nke ọ bụla na-etinye curls, ga-adọrọ mmasị mgbe niile ma mee ka ọ pụta ìhè gị. Na afọ a nabatara dịka ihe na-adịghị mfe, na nghọta doro anya.
Ihe ngosi mma . Na omume na-anọgide na ngwọta na ọla mma mara mma na ọbụna ọla. Nhọrọ nke a na-emepụta ihe ga-abụ ngwakọta nke nkume rhinestones na nkume ndị dịgasị iche iche n'ogologo ya, akwụkwọ nchacha, nnukwu ntutu isi.
Nleghara anya . Ọ bụrụ na ịnweghị oge maka nhazi mgbagwoju ma ọ bụ na ị na-echekwa ego gị, kwụsị na ihe dị mfe ịrụ ọrụ, ma ọ bụ emekarị ewu ewu - enweghị mgbakọ. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka ị ghara imebiga ya ókè, na-eme ka ọ ghara inwe nchekasị.
Uwe isi na nkwa maka ogologo ntutu 2018
Ụmụ agbọghọ ndị mara mma na-agba mbọ ka ha kwado ha. N'okwu a, anaghị ahọrọ elu ma kpọkọta nchịkọta. Ma mkpebi ndị na-ezighị ezi ma ọ bụ echiche ndị a na-ejighị ya na-atụle na ntinye ihe ịchọ mma ga-abụ nhọrọ ziri ezi. Ejiji edozi ejiji na ngụsị akwụkwọ 2018 na ogologo ntutu isi ga-emesi ike ịlụ nwanyị, nhazigharị na ịhụnanya. Na eriri dị iche iche, ụgbụgbọ na-egbukepụ egbukepụ, nkume pel, eriri dị mkpa na ụbọ akwara agaghị adị oke. Ọ bụrụ na ụjọ anaghị atụ gị, ịnwere ike ịgbakwunye agba agba na iche iche.
Hairstyles maka gụsịrị akwụkwọ na ọkara ntutu 2018
Ndị kasị nwee obi ụtọ, dị ka ndị stylists, bụ ndị nwe ogologo oge. E nyere ụmụ agbọghọ a ọtụtụ nhọrọ. Hairstyles 2018 ngụsị akwụkwọ na ogologo ogologo ogologo ntutu isi na-atụ anya na mkpebi na-enweghị nchebe mkpebi na mgbakwunye nke ọla, na-acha odo odo ma ọ bụ na-enweghị ihe ịchọ mma ngwọta. Na-emekarị na nchịkọta ihe, ma elu ma n'azụ isi. Ihe kachasị mma bụ echiche ndị a na-ese na njedebe dị iche iche. N'ọnọdụ a, na ntinye aka nwere ike ịbụ ma anụ ahụ dị nro, ma jidekwa anya nke anya ma ọ bụ egbugbere ọnụ.
Hairstyles maka ngụsị akwụkwọ 2018 na obere ntutu
Otu n'ime ihe ngwọta kachasị mma maka ndị nwere ntutu isi dị ọcha ghọrọ ụgwọ. Ọ bụrụ na mkpuchi gị ekpuchi ntị gị, mgbe ahụ, a ga-enye ha ụda kachasị elu na obere ntakịrị nlezianya, na-ekewa n'ime obere ringlets. Ejiri ejiji obere oge na 2018 na-egosi ụdị nke 1920. Nke a bụ ikpe mgbe ezigbo mma na ịlụ ọgụ kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na foto gị kwekọrọ n'ụdị ejiji dị nro, ị nwere ike ịgbakwunye nwa osisi mara mma, ụta ma ọ bụ ogwe aka gị n'isi. N'okpuru nkwekọrịta siri ike ọ ka mma ime na enweghị ọla. Ma melirovanie ma ọ bụ agba agba ga-aba uru.
Ejiji edozi isi na ngụsị akwụkwọ 2018
Nchọpụta mara mma kwesịrị iji aka ya dozie. Ọ dị ezigbo mkpa ịtụle isi awọ. Ọ bụrụ na ị kwụsịrị na echiche ndị dịka ndị na-acha anwụrụ ọkụ, anya na-acha uhie uhie na akụ doro anya, mgbe ahụ, agbaaka ka mma ịhọrọ monophonic na ọkọlọtọ ma ọ bụ ndo. Uwe isi na mmebe na mmezu nke afọ 2018 na ejiji dị nro na-ekwesịghị inwe mgbagwoju anya. Otú ọ dị, ọla ndị inyom kwesịrị ekwesị ebe a. Mgbakwunye na isi ga-enwe ihe ịga nke ọma n'ime ụta ndị na-agba ụta, ndị na-awụ akpata oyi n'ahụ na ụta. Ka anyị lee echiche kachasị ewu ewu maka bọl:
Hairstyles na prom na okooko osisi 2018 . Utu ahihia bu ihe di mkpa maka ihe obula obula - oge ochie, ihunanya, na ihe ndi Boho na ndi ozo. Ndị na - ede akwụkwọ na - eji okooko osisi na - emepụta ihe na - emepụta ihe, na - emepụta ihe dị iche iche na ụyọkọ buds.
Uwe isi na ngụsị akwụkwọ na rim 2018 . Ngwa a agaghị abụ naanị ihe mgbakwunye na ihe osise mara mma, kamakwa ị ga-enwe ọganihu kwa ụbọchị. N'ihe na-eme ka mmiri ahụ dị n'elu ụrọ na ígwè ma ọ bụ osisi e ji osisi rụọ na mma nke nkume rhinestones, nkume, okooko osisi.
Na ọdụ . Otu n'ime ihe ngwọta kachasị mfe bụ ọdụdụ dị mfe. Nke a na-adabara ndị nwe ogologo curls. Ọ dị ezigbo mkpa na n'echiche dị otú ahụ, ọ dịghị ihe ọ bụla edozi.
"Malvinka" . Achọpụtara mmeri nke dabara adaba ọ bụla ekike na ụdị ọdịdị dị ka nhọrọ nhọrọ n'efu na eriri n'akụkụ ndị a na-etinye na nape. "Malvinka" na-esekarị nwanyị na nwayọ.
Hairstyles maka ngụsị akwụkwọ 2018 - curls
Nhọrọ mara mma bụ nnukwu curls. Na oge a na ejiji ejiji na-enweghị nchekasị, na-etinye ya n'atụghị egwu ma ọ bụ n'amaghị ama. Echiche a kachasị mma nke na-acha na agba na ntutu. Nlezi edozi mara mma na ngụsị akwụkwọ 2018 - nnukwu curls na-agbada na azụ. Nhọrọ a dị mma ma n'otu akụkụ. Tinye nnukwu ntutu ma ọ bụ mkpuru osisi n'akụkụ akụkụ ahụ, foto gị ga-achọta nkọwa ndị nwanyị na nke ịhụnanya. Taa, a pụrụ iji curlers ma ọ bụ ndị na-eme njem nlekọta na-emegharị ọnụ. Ma idiri anya dị ka ejiji na ntụgharị.
Akpụkpọ ụkwụ maka ngụsị akwụkwọ 2018 - ịcha akwa
N'afọ a, mgbagwoju anya na ihe dị mma laghachiri ejiji. Maka ihe omume dị egwu dị ka bọlbụ ngụsị akwụkwọ, a na-ele mkpebi a anya dị ka ihe dị mkpa. A na-eji ejiji na ememe ngụsị akwụkwọ 2018. Na-emekarị, nchikọta nke obere pigtails. Ihe mbụ dị ka nnukwu spikelet. Ihe atụ na-agbakwunye na ihe atụ na-abụghị ihe atụ, dịka ọmụmaatụ, ya na akwa eji akwa akwa ga-abụ "ọdụ azụ". Ụmụ nwanyị nwere ike imepụta isi. Ihe mgbakwunye dị iche iche ga-abụ mpe akwa ma ọ bụ agbụ ígwè. A na-ejikọta ọnyà na ụdị ụdị ntutu isi na linings ndị ọzọ.
Akwa edozi isi na ngụsị akwụkwọ 2018
Ụmụ agbọghọ ndị siri ike ịnagide ringlets na-adịghị mma, stylists na-enye ndị a họọrọ n'elu nhazi. Ihe ngwọta dị otú ahụ ọ bụghị nanị na-adọrọ mmasị, ma ọ na-elekwa anya na-agbatị olu, na-emeghe ebe a na-agbapụta ihe ma na-eme ka ube jide ya. Akwa edozi isi nke ikpeazụ na 2018 ga-enye nkasi obi kachasị na okpomọkụ. Otú ọ dị, ịgbakwunye otu aka nke femininity, ị nwere ike ịkwatị ọnụọgụ abụọ. A na-enye echiche ndị dị elu site na braids. A na-elechapụ shea anya nke ọma, nke nwere ike ịgbakwunye ya na mkpanaka ya na rhinestones , pinyere pearl ma ọ bụ osisi ndị China.
Uwe isi maka ngụsị akwụkwọ 2018 na ntutu isi
Nyere na n'oge na-adịbeghị anya ọchịchọ nke ụlọ ọrụ ahụ mara mma na-adabere na okike na nke kachasị mma, mgbe ahụ, a na-ewere ụdị dị iche iche na eriri dị ọcha dị ka ewu ewu taa. Tụkwasị na nke a, mkpebi a na-elekarị nwanyị anya ma dị irè. Ogologo oge adịghị mkpa ma ọlị. Ụzọ kacha mma edozi isi na 2018 na-akwadocha ihe ịchọ mma. Na nke a, ngwa ọ bụla kwesịrị ekwesị - nnukwu otu buds na ihe ndị na-acha ọkụ ọkụ na rim ma ọ bụ ribbon, tiaras, ntutu isi. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye ọkwa, jiri crayons acha.
Uwe isi maka ngụsị akwụkwọ 2018 na tiara
Ihe ngwọta zuru oke maka obi ụtọ nke ndị gụsịrị akwụkwọ ga-abụ ihe mma nke ndokwa ha site n'enyemaka nke onye tiara. Ngwa ngwa nwanyị a na-emetụta onyinyo nke nwa-nwoke na eze nwanyị. Otú ọ dị, na nke a, ọ ka mma ịkwụsị ịhọrọ uwe ejiji ma ọ bụ ịkpụcha ejiji ya. Ulo ejiji kachasị mma na mmemme ngụsị akwụkwọ 2018 bụ stowages dị elu nke nwere okpueze mara mma n'etiti. N'okwu a, ogo nke okpueze nwere ike ịbụ nnukwu ma ọ bụ ihe dị mma. Na emekarị, jiri ngwa abụọ ma ọ bụ atọ n'otu oge. Nke a na-achọ mma dị mma na na ntutu isi nke ọ bụla ogologo.
Volunetric edozi isi na prom
Ngwongwo na udu mmiri na-ele anya mgbe niile. Ihe ngwọta kachasị mfe bụ ịme ogologo oge. Tinye ebe a dị ole na ole dị iche iche ma ọ bụ ihe ịchọ mma mbụ, onyinyo gị ga-adịcha mma. Isi edozi isi na ngụsị akwụkwọ 2018 - iji ogbo. Ngwa a anaghị achọpụta na ụkwụ, ma ọ na-ebuli okpueze ahụ nke ọma. Nhọrọ a dabara adaba maka ihe oyiyi dị iche iche . Ihe na-adọrọ mmasị ma na-adọrọ adọrọ nke na-adọrọ mmasị na-adọrọ adọrọ na ntinye atọ nke oyi akwa ọ bụla. N'ebe a, ụbọ akwa ma ọ bụ ụta ga-ejikọta na agba nke ekike.
Hairstyles maka ngụsị akwụkwọ 2018 - bundle
Elela ụdị ụdị edozi anya, nke na-adịbeghị anya na-enweta ihe omume kwa ụbọchị. Na foto dị mma, otu nhazi nke nwere ike ịme ka mgbatị dị mma ma ọ bụ oge nlekọta. Na ejiji nke ihe ngwọta ya na olu kachasị elu ma tinyezie curls. A na-eji ejiji eji ejiji eji eme ihe na-adịghị mma n'oge ikpeazụ 2018, nke kachasị ewu ewu bụ ihe nlegharị anya maka ejiji Grik. Ụyọkọ mara mma nwere ike ịme ọ bụghị naanị okpueze, ọ bụ ezie na echiche a dịkwuo mma na okpomọkụ. Ndị na-ede akwụkwọ na-eme ka bun dị n'akụkụ, n'azụ isi ma ọ bụ ọbụna na mbipụta abụọ.
Hairstyles na ngụsị akwụkwọ 2018 na bangs
Ọ bụrụ na ịnwe akara, mgbe ahụ, n'akụkụ a nke ịme ka ị nwee ike ịnwale ntụgharị uche, na-eme ka enyo na-egbuke egbuke na mbiet ahụ. Ihe ngwọta kachasị mfe bụ ihe dị elu nke nwere ngwa ngwa nke na-ekewa mpaghara ihu. N'okwu a, ma ntutu isi na ntutu isi gbakọtara na ùkwù ma ọ bụ shei ga-abụ n'ezie. Ụmụ agbọghọ nwere ntutu dị mkpụmkpụ nwere ike ịcha akwa dị iche iche. A na-enye ụzọ nchịkọta abalị maka ngụsị akwụkwọ 2018 na ụdị mmemme. N'ebe a kwa, ọnụ ụlọ ndị ahụ na-arụ ọrụ bụ isi, nke kwekọrọ n'ụdị ntakịrị nleghara anya.
Hairstyles maka ngụsị akwụkwọ 2018 na-enweghị bangs
Ihu ihu na-eme ka onyinyo ahụ dị mma, nwayọ na nwanyị. Ịgba aka n'èzí n'emeghị ka ọ dị mma na-eme ka ndozi dị mma , na-emesi anya ike. A na-ewere otu akụkụ nke isi na ntutu isi na-eme ka ọ bụrụ ihe ngwọta. N'okwu a, a ga-etinye ntutu isi ma n'akụkụ ya. A na-eji ntutu dị iche iche nke nhọrọ - na etiti, n'akụkụ, dị larịị, oblique, zigzag. Egedege ihu ya nwere ike iji mma nkume ma ọ bụ pịrị na nnukwu nkume. Nhọrọ mbụ a ga - abụ ihe mkpuchi na - agbanye ọkụ na - aga n'ihu na oval.
Emebido akpa akwa 2014
Kedu uwe ga-abụ na ejiji n'oge mgbụsị akwụkwọ 2016?
Nwanyi Gbasara Dolce Gabbana Collection 2016
2013 Nri isi maka Kwa Ụbọchị
Nwanyị inyom - mmiri-okpomọkụ 2015
Ejiri ejiji - Mgbụsị akwụkwọ 2014
Uwe mgbede ehihie
Vase si aka aka maronironi
N'oge okpomọkụ collection nke etemeete Chanel 2014
Na-ahụ n'anya n'anya mbụ
Akwa ugbo si na nkịta
Egwuregwu New Russia: mmalite nke ọdịnala
Naomi Campbell zutere otu nde ndị Ijipt
Ịmịfụ nke mmehie nke imi
Jam si dogwood - ọma na ihe ọjọọ
Ihe osise dị n'ime ime ụlọ ahụ
Ụdị Oscar - uwe
Ogulov - afọ ịhịa aka n'ahụ
"Ụmụaka na-anaghị akpọtụrụ" - esi kụziere ndị enyi?
Onye na-eme ihe nkiri Tom Hardy na-akwanyere nkịta nke nwụrụ anwụ nche site na edemede edemede
Mkpụrụ vaịn - ngwa na ọgwụ ndị mmadụ, cosmetology na nri
Na-atụ anya na mbo n'okpuru ohiri isi
Sprayer maka akwarium
Debe ihe na mbara ihu na aka aka gị